Gawaarida aan rasaasta karin oo loogu Deeqay Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya – STAR FM SOMALIA
Dowladda Emirate-ka Carabta, ayaa 11 gaadiid ah ugu deeqday Maamulka Koonfur Galbeed Somaliya, deeqdan oo qayb ka ah taageerada Emirate-ka uu siinayo Dowladda Dhexe Somaliya iyo Maamul Goboleedyada Wadanka ka dhisan.
Gaadiidkan oo ka kooban 11 xabo, ayaa isugu jira gawaarida aanay rasaastu karin, kuwa ciidanka, booyad iyo mid ka mid ah gawwaarida gurmadka deg degga ee loo yaqaano (Ambulance-ka).
Safiirka Emirate-ka Carabta u fadhiya Somaliya, Danjire Mohammed Ahmed Othman Al Hammadi, ayaa Arbacadii gaadiidkan ku wareejiyay Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed, Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Safiirka, ayaa muujiyay in taageeradan ay qayb ka tahay midda Emirate-ka Carabta uu siinayo Dowladda uu Madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo deeqdan kula wareegay Magaalada Muqdisho, ayaa Emirate-ka Carabta kaga mahadceliyay deeqda uu soo gaarsiiyay Maamulka uu hogaamiyo.
Shariif Xasan Sheekh Aadan, ayaa wuxuu Emirate-ka uu ku ammaanay mid garab taagan Dowladda iyo shacabka Somaliyeedba, si Somaliya ay u soo ceshato sharaftii ay dunida ku laheyd.
Safaaradda Emirate-ka Carabta uu ku leeyahay Magaalada Muqdisho, ayaa deeq gaadiid horey ugu wareejisay Dowladda Dhexe Somaliya iyo Maamul Goboleedyada qaarkood.